प्रेरक | Nepali Virals
जन 17, 2018 | प्रेरक
भनिन्छ नि मानिसका जीवनले कतिखेर कोल्टे फेर्छ भन्नै सकिन्न। जस्तो सुकै कठिन समय होस्, केबल आफूमा केही गर्ने हिम्मत, चाहना र इच्छाशक्ति भने हुनुपर्छ । सामान्यतया हाम्रो समाजमा असफलतालाइ सकारात्मक ढंगले हेर्ने चलन नै छैन, त्यसका सट्टा सानोतिनो असफलतामै बच्चाहरूलाई गाली गर्ने, हप्काउने, कुटपिट गर्नेदेखि केही अभिभावकले त घरबाटै निकालिदिनेसमेत गरेका देखिन्छ । जबकी, यदि हामीले बच्चाहरूलाई सम्झाई बुझाई गर्ने हो, उत्प्रेरणा दिने हो भने आफ्नो गल्तीबाट सिकेर भविष्यमा सफल बनेका उदाहरण पनि कैयन छन् ।
भारतका विमल पटेललाई पनि उनका पिताले सात कक्षामा फेल भयो भनेर घरबाट निकालिदिएका थिए । आज तिनै विमल भारतका ज्वेलरी सम्राटका रूपमा चिनिन्छन् । उनको भारतको महाराष्ट्रमा मात्रै गरगहनाका ५२ बिक्री कक्ष छन् भने उनको कम्पनीमा हाल ५५० मानिसहरूले काम गर्नेगर्छन् । उनको कम्पनी भारतका ‘१०० करोड क्लब’ (अर्बपति क्लब)मा पर्छ ।
जब बाबुले घरबाट निकालिदिए
गुजरातकाे आणन्द भन्ने ठाउँका विमल पटेलका पढ्न खासै मन लाग्दैन थियो, शायद यही कारणले हुनसक्छ उनी सात कक्षाको वार्षिक परीक्षामा फेल नै भए । एक दिन विमलले ससानो कुरामा छिमेकीसँग झगडा गरे । यो कुरा उनका बुवालाइ पचेन र उनले रिसका झ्वाँकमा विमललाइ घरैबाट निकाली दिए ।
हिरा काट्ने/चम्काउने काम
पछि रिस शान्त भएपछि उनका बुवाले घरमा बोलाए । उनका बुवा हिरा काट्ने, चम्काउने काम गर्थे । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण उनका बुवाले उनलाई आफूसँगै काम सिक्न भने ।
मासिक चार हजारको आम्दानी
विमलले बम्बई गएर आफ्नो नयाँ जिन्दगी शुरू गर्ने निर्णय लिए । बम्बई (हालको मुम्बई) पुगेपछि उनले हिरा टल्काउने मजदूरको काम पाए । दिनभरि मजदुरका काम गरेपछि उनले मासिक चार हजार भारु पाउँथे ।
उनले हिरा टल्काउने मजदूरका रूपमा दुई वर्षसम्म काम गरे । यही बीचमा उनको पारिश्रमिक पनि ७५ प्रतिशतसम्म बढ्यो , तर उनले यही ढंगले चल्दै गए आफू अघि बढ्नै नसक्ने निष्कर्ष निकाले । उनका केही साथीहरू कच्चा हिरा (रफ डायमन्ड) र रत्नपत्थरको दलालीका काम गर्थे र त्यसबाट कमिसन आर्जन गर्थे । उनले सन् १९९७ मा आफ्ना साथीहरूसँग मिलेर काम गर्न थाले अनि हिरा र रत्नपत्थर व्यवसायका मिहिन कुराहरू सिके ।
सन् १९९८ मा विमलले आफ्नै व्यवसाय आरम्भ गरे । उनले श्रीलंका र थाइल्यान्डका व्यवसायी तथा बम्बईका स्थानीय व्यापारी तथा गरगहना बनाउनेहरूबीच दलाली गर्नुपर्थ्यो । यस कामबाट उनले दैनिक एक हजारदेखि दुई हजार भारुसम्म आम्दानी गर्थे । यसरी उनले मुम्बईका ’roundका क्षेत्रहरूमा आफ्नो पहुँच स्थापना गरे र सन् १९९९ मा ५० हजार रूपैयाँको बचतबाट “ विमल जेम्स” नामक कम्पनी खोले ।
शून्यमा झरे विमल
प्रारम्भमा आफ्नै केही दाजुभाइहरूका सहयोगबाट कम्पनी सञ्चालन गर्न थालेका विमलले पहिलो वर्ष नै निकै राम्रो लाभ गर्न सफल भयो । पहिलो वर्ष उनको कम्पनीले ८ जनाका सहयोगबाट १५ लाख भारुको खुद कारोबार गर्‍यो। तर सन् २००१ का वर्ष उनका लागि कठिन समय साबित भयो । विमलको कम्पनीमा काम गर्ने एउटा कामदार कच्चा हिरा तथा रत्नपत्थर आपूर्तिकर्ताको २९ लाख रूपैयाँबराबरको हिरा र रत्नपत्थर लिएर फरार भयो । विमलले आफ्नो पूरै लगानी त्यही कच्चा हिरा तथा रत्नपत्थर आपूर्तिकर्ताका नोक्सानी तिर्नका लागि खर्च गर्नुपर्‍यो । यसरी एक पटक फेरि विमल शून्यमै झरे, तर उनले हार मानेनन् । उनको व्यवसायले पुनः जीवन पायो ।
मन्दीपछिका व्यापारको चढाव
सन् २००८ मा उत्पन्न भएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र त्यसले भारतीय बजारमा पारेको प्रभावबाट समेत उनी नराम्रोसँग प्रताडित भए । तर मन्दीका बेलामा व्यापार गर्ने उपाय उनले खोजी हाले । उनले खुद्रा व्यापारमा पनि हात हाले । उनले जलगाँउमा पहिलो ज्वेलरी पसल खोले र एक जना ज्योतिषलाई पनि काममा राखे । ज्योतिषीका मद्दतबाट ग्राहकले सही रत्न छान्न र लगाउने उत्प्रेरित गर्ने उनको आइडियाले काम गर्‍यो । पहिलो दिन नै लाखाैंका कारोबार भयो ।
५२ बिक्री कक्ष
त्यसपछि उनले पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन । अहिले सुवर्णस्पर्श जेम्स एन्ड ज्वेलरीकका भारतको महाराष्ट्रभरिमा ५२ वटा बिक्री कक्ष छन् भने उनले वाशी नामक स्थानमा जेम्स र ज्वलरी फ्याक्ट्री पनि खोलेका छन् । निकट भविष्यमै उनले भारतभरि आफ्नो शाखा विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् ।
अप्रिल 17, 2016 | प्रेरक, फेमस, भिडियो, हट टपिक्स
पेट्रोलियम पदार्थ सिमित देशहरुमा मात्रै उत्पादन हुन्छ तसर्थ बिश्वका थुप्रै देशहरु डिजेल पेट्रोलको अभावमा पिरोलीरहेका छन् । यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । केही समय अघि भारतीय नाकाबन्दी हुँदा देखिएको हाहाकारले सर्वसाधारणले हदैसम्मको दुख भोग्न बिबस भए ।
भारतका एक मेकानिकले पानीबाट चल्ने गाडी बनाएर चमत्कार गरेका छन् । भारतको मध्य प्रदेशका एक गाडी बनाउने मेकानिकले पानीबाट चल्ने कारको आविष्कार गरेका हुन् । रइस मकरानी नामका यी मेकानिकले भर्खरै मध्यप्रदेशको सागर जिल्लामा चार सिट भएको पानीबाट चल्ने कार बनाएका छन् ।
आफ्नो प्रविधि लिएर चीन गएका रइसले त्यहाँको सियाग सहरमा विद्युतीय गाडीहरु बनाउने कम्पनीसँग थप उपकरण लिएर भारतमा पेट्रोलको सट्टा पानीबाट चल्ने कार निर्माण गरेका हुन् ।
विगत १५ वर्षदेखि मेकानिकल काम गरिरहेका रइसले आफु कहिल्यै स्कुल नपढेको र घरमा समेत पढाइलेखाई नगरेको बताएका छन् । उनले आफ्नो कामको अनुभवबाटै उनले पानीबाट चल्ने कार बनाएर हुन् ।
कसरी बन्यो यो गाडी ?
मेकानिक रईस सधैजस्तै एक गाडी बनाइरहेका थिए, त्यही बेला उनको दिमागमा एउटा आइडिया आयो । उनले कारको इन्जिनमा बदलाब गरेर गाडीको फ्युल ट्यांकीमा पेट्रोलको सट्टा पानी र क्याल्सियम कार्बाइडको पाइप लगाए ।
त्यसपछि गाडीलाई स्टार्ट गर्दा इन्जिन अन देखायो । यो काम यति सजिलै भएको थियो, तर उनलाईै सबै अध्ययन गर्दागर्दै गाडी निर्माण गर्न भने पुरै पाँच वर्ष लागेको थियो । रईसले तयार गरेको कारमा २० लिटर पानी र २ किलो क्याल्सियम कार्बाइडको मिश्रणबाट २० किलोमिटर गुड्छ ।
यो टेक्नोलोजी अनुसार पानी र क्याल्सियम कार्बाइड मिलाउँदा एसिटिलीन पैदा हुन्छ । मेकानिक रईसले एसिटिलीनबाट चल्ने इन्जिन तयार गरि यो गाडिमा फिट गरेका छन् । जसका कारण एसिटिलीन बन्ने वित्तिकै कार चल्न सुरु गर्छ ।
अप्रिल 4, 2016 | प्रेरक, फेमस, हट टपिक्स
रेकर्ड भन्ने बितिक्कै एकदमै गार्हो र चमत्कार भन्ने अर्थ लाग्छ । कुनै पनि कुराको रेकर्ड राख्नु चानचुने कुरो होइन अझं रेकर्ड तोड्नु त असम्भबप्राय: कुरा हो । तर कतिपय व्यक्तिहरु यस्ता हुन्छन जसले थुप्रै रेकर्डहरु राखेका हुन्छन । आफ्नो र अरुको रेकर्ड तोड्न मरिहत्ते गर्छन र सफलता प्राप्त गर्छन ।
कतिपय रेकर्डहरु यस्ता पनि हुन्छन जुन सुन्दै आङ जिरिङ् हुन्छ । सामान्य मानिसको कल्पना भन्दा पनि बाहिरकजा रेकर्डहरु समेत राखेका हुन्चाहं कतिपयले । त्यसो त गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रिकर्डमा यी र यस्ता थुप्रै रेकर्डहरु छन् जसमध्ये पनि अनौठो, अपत्यारिलो र दुनियाँलाई नै चकित पार्ने ४ रेकर्ड यस्तो छ ।
‘मिस्टर ईट अल’
फ्रान्सका माइकल लोटिटोले पूरै जहाज खाएर विश्व रेकर्ड बनाएका छन् । उनलाई ‘मिस्टर ईट अल’ पनि भनिन्छ । उनले मोटरसाइकलका पार्टस्, सपिङ कार्ड खाएका थिए । मिनिरल ‘वइल’ तथा पानीको मद्दतले उनले विभिन्न सामानका पार्टपुर्जा खाने गरेका थिए ।
तिनै माइकलले दुई वर्ष लगाएर एउटा जहाजका सबै पार्टपुर्जा खाएका थिए । ग्रिनिज वल्र्ड अफ दि रेकर्डमा रहेको यो उनको ऐतिहासिक विश्व रेकर्ड हो । माइकलको ५७ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो ।
किर्बी रोय यस्ता व्यक्ति हुन जसले आफ्नो नाममा एक दर्दनाक रेकर्ड बनाएका छन् । उनले आफ्नो कम्मरमा सबैभन्दा बढी लात खाएको रेकर्ड बनाएका छन् । उनलाई अमेरिकाका एमएमए फाइटर तथा ग्लेडिएटर जस्टिस स्मितले लात हानेका थिए । लातको स्पीड २२ मील प्रतिघन्टा भन्दा बढी थियो ।
गिनिज बुकमा विभिन्न उट्पट्याङ काम गरेर पाँच सय ५१ रेकर्ड कायम गर्ने व्यक्ति हुन- अशरिता फरमेन । उनी यस्तै रेकर्ड बनाउनमा माहिर छन् भने रेकर्ड कायम गर्ने उनको रुचि हो । न्यूयोर्कमा जन्मिएका उनले पोगो स्टिक (खुट्टाले टेकेर हिँड्न सक्ने लौरा)को मद्दतले २७ हजार जम्प गरेर विश्व रेकर्ड बनाएका छन् ।त्यस्तै उनले बेसबललाई सन्तुलन गरेर धेरै समय राख्ने रेकर्ड लगायतका अरुलाई सामान्य लाग्ने तर उट्पट्याङ खालका पाँच सय ५१ विश्व रेकर्ड अशरिताका नाममा ग्रिनिज बुकमा दर्ता भएका छन् ।
विश्वमा सबैभन्दा बढी चिच्याउन सक्ने व्यक्तिको रेकर्ड ब्रिटेनकी टीचर जिल ड्रेकका नाममा रहेको छ । उनले एक सय २९ डेसीबल चिच्याएर आफ्नो नाम ग्रिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डमा राखेकी छन् । उनी भन्दा पहिला यो रेकर्ड उत्तरी आयरल्यान्डकी एनालिसा फ्लानागनका नाममा दर्ता गरिएको थियो ।
अप्रिल 3, 2016 | प्रेरक, बिर्सेका, सम्बन्ध, हट टपिक्स, हाँसोउठ्दो
धेरैको टाउको दुखाइको बिषय बन्ने गर्छ तौल बढ्नु । तौलसंगै भुँडी बढ्यो भने झन् थप समस्या आइ पर्छ । तौल बढेर बिभिन्न समस्याहरु निम्तिनु झन् पीडा माथि पीडा नै भयो । तौल बढेपछि रोगहरुको उपचार गर्नु भन्दा पनि तौल घटाउनु मुख्य कुरा हो । तौल नघटाए रोगको उपचार असम्भब प्राय: हुन्छ ।
तर अचम्म त के छ भने तौल घटाउन त्यति सहज छैन । जे जस्तो सुकै गर्दा पनि तौल घटाउन नसकेर हैरान हुनेहरुको जमात पनि बाक्लो छ । तौल घटाउन औषधि खानेदेखि बिहान सबेरै कुद्नेहरुको लाइन छ । तर स्मरणीय कुरा के हो भने मौसम अनुसारको तरिका अपनाउन सके तौल नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ । अहिले गर्मीको मौसम छ । गर्मीको समयमा यी काम गर्नुस तपाइलाइ तौल घटाउन अवश्य नै सहयोग मिल्नेछ ।
गर्मीको महिनामा दहीको प्रयोग गर्नाले तपाइको लागि धेरै नै फाइदा पुग्नेछ । दहीले तपाईलाई पोषण प्रदान गर्नुको साथै शरीरमा गर्मी बढ्न पनि दिँदैन । यसले तपाईको तौल पनि घटाउन मद्धत गर्छ । दहीले तपाइलाइ भोको महसुुस गराउँदैन जसले अन्य धेरै खान पनि रोक्छ ।
दहीबाटै बन्ने माहीको प्रयोग पनि तपाइको लागि निकै लाभदायक हुन्छ । यसलाइ पानीको रुपमा प्रयोग गरेर होस वा तरकारीमा मिसाएर खानाले तपाईको शरीरमा बोसोलाई नियन्त्रण गर्न र दुव्लो बनाउनमा मद्धत गर्छ ।
गर्मी महिनामा जतिसक्यो पैदल हिँड्दा तौल सजिलै घट्न सक्छ । गर्मी महिनामा पसिना धेरै आउने हुनाले बोसो पग्लिन्छ । यसको साथै व्यायमले पनि तपाइलाइ छरितो शरीर दिन मद्धत गर्छ ।
गर्मी महिनामा लौका, घिरौंला जस्ता तरकारी हल्का र फाइदामुलक हुन्छन् । लौकाको जुसले पनि तपाइको तौल घटाउन मद्धत गर्छ । यसले तपाईको तौल नियन्त्रण गर्नुको साथै पाचन प्रक्रिया पनि निकै राम्रो बनाउँछ ।
गर्मी महिनामा कागती पानीको प्रयोग निकै हुने गर्छ । यसले शरीरमा उर्जा दिनुको साथै शरीरमा पानीको मात्रा बनाइ राख्न र तौल घटाउने काममा लाभदायक हुन्छ ।
यो पढ्न छुट्यो कि ?
केटीहरु बाथरुम पसेर यस्तो सोच्छन
मार्च 24, 2016 | प्रेरक, फेमस, भिडियो, हट टपिक्स
गीत सुन्दा लाग्छ उनी ‘डिप लभ’ बाट ट्राजिडी भएकी छिन् । उनलाई कसैले ठूलो पीडा दिएको छ । र त उनी भन्दैछिन ‘तिमीले बाटो फेर्यौ अरे…’ । एकदमै प्रेम बिछोडपछिको बेदना मिश्रित यो गीतले धेरै युवायुवतीको मन छुन्छ । प्रेम बिछोड भोगेकाहरु गीत सुन्दै आँसु चुहाउछ । तर गीतमा दिइएको स्वर भने सक्कली हो भनेर कसैले पत्याउदैन । तर नपत्याई सुखी छैन ।
सबैलाई अतित सम्झाएर सोच्न बाध्य पार्ने यी नानी हुन् ७ बर्षीय जिग्मे छ्योकी घिसीङ । सानी नानी उनी कक्षा ३ मा पढ्छिन । तर यो गीत चर्चामा आएसंगै उनको चर्चा निकै उक्लिएको छ । युट्युबको एउटा च्यानलमा मात्रै उनको गीत तीन दिनमै साढे २४ हजार भन्दा बढीले हेरेका छन् ।
उनमा वाद्ययन्त्र हार्मोनियन आफै वजाएर गाउने क्षमता पनि छ । बारा निजगढ घर भएकी घिसिङ अहिले आमा बसन्ती लामासँग काठमाडौं स्वयंम्भुमा बस्दै आएकी छन्। बाबु रामकाजी घिसिङ कोरियामा कामको सिलसिलामा छन् । उनको सुरिलो स्वर सुनेर युट्युबमा थुप्रै प्रशंसा र शुभकामना पोखिएका छन् ।
हेर्नुस युट्युबमा उनको प्रशंसा
गीत हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
मार्च 17, 2016 | प्रेरक, फेमस, हट टपिक्स
हाँसो र खुसी नै जीवनका रंग हुन् । हास्नु, रमाउनु नै खुसि हुनु हो । यो नै जीवन जिउनुको मज्जा हो । जीवन ज्युनुको सार्थकता हो । मान्छे जति खुसीसाथ बाच्न सक्यो त्यति नै उसको आयु लामो हुन्छ । त्यसैले पनि हामी सकभर खुसी र सन्तुष्टि भएर बाच्न सिक्नु पर्छ ।
तर बिडम्बना, खुसी हुन् चाहदा चाहदै पनि अरुकै कारणले दु:खी बन्नुपर्ने अबस्था आइ दिन्छ । हरेक मान्छे स्वास्थ्य, सम्पन्न र खुसी हुन् चाहन्छ तर उसको परिवेश र बाताबरणले उसलाई दुखी र स्वार्थी बनाइ दिन्छ । कुनै पनि देशका नागरिक त्यो देशको बिकास र स्थिरतामा निर्भर रहन्छ । हालै सार्वजनिक एक रिपोर्टले यस्तै देखाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट सोल्यूसन्स नेटवर्कले प्रकाशन गरेको विश्व हेप्पीनेश रिपोर्टका अनुसार सबैभन्दा खुशी राष्ट्रमा डेनमार्क पहिलो स्थानमा परेको छ । सन् २०१३ देखि अहिलेसम्म डेनमार्क पहिलो स्थानमा रहँदै आएको छ । त्यसपछि स्वीट्जरल्याण्ड दोस्रो र आइसल्याण्ड तेस्रो स्थानमा छन् ।
सूचीमा अमेरिका १३ औं स्थानमा छ भने वेलायत २३औं स्थानमा छ । फ्रान्स ३२ र इटली ५०औं नम्बरमा छ । त्यस्तै जापान ५३ औं, पाकिस्तान ९२ औं स्थानमा छन् । रिपोर्ट अनुसार भारतीय भन्दा पाकिस्तानका जनता बढी खुसी छन् त्यस्तै भारतीय भन्दा नेपाली पनि बढी खुसी रहेको पनि रिपोर्टको तथ्यांकले देखाउछ । भारत ११८ औं स्थानमा छ भने नेपाल १०७औं स्थानमा छ । सुचीको अन्तिममा बुरुन्डी, सिरिया, टोगो, अफगानिस्तान, वेनिस, रुवान्डा, गिनी, लाइवेरिया, तान्जानिया र मेडागास्कर छन् ।
आगामी आइताबार विश्व खुशी दिवस मनाईंदै छ । यस अबसरमा प्रकाशित यो रिपोर्टमा १५६ देशमा गरिएको अध्ययन तथाअनुसन्धान गरिएको जनाएको छ ।
हेर्नुस बिस्तृत सूची
बिस्तृत रिपोर्ट पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
खाना पकाउने १० तरिका, यसरी टिक्छ तपाईको ग्याँस २ महिना बढी
यी हुन् विश्वकै खराब १० विमानस्थल, नेपालको दोस्रो खराब
भगवानको पालामा मोबाइल भएको भए …